Real Madrid oo kalsooni ku qabta saxiixa Eden Hazard & Qiimaha ay ku soo qaadanayso oo daaha laga rogay – Gool FM
(London) 07 Feb 2019. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa la soo warinayaa inay sare u qaaday xiisaha ay u qabto saxiixa Eden Hazard, waxaana ay kalsooni ku qabtaa inay soo qaadanayso Weeraryahanka Chelsea.
28-sano jirkaan ayaa ku qaatay garoonka Stamford Bridge lix sanadood iyo bar, laakiin xiddiga xulka qaranka Belgium ayaan wax qarsoodi ah ka dhigin inuu doonayo inuu metelo kooxda Real Madrid.
Hazard heshiiskiisa waxaa uga harsan wax ka yar 18 bilood, umana badna in kooxda Chelsea ay xafitado xiddigan sare, maadaama uusan weli saxiixin heshiis cusub.
Jariiradda The Mirror ayaa warinaysa in wadahadallada Chelsea iyo Hazard aysan horumar samaynin, waxaana la rumeysan yahay in taasi ay ku hoggaamin doono inuu noqdo ciyaaryahan ka mid ah shaxda kooxda Real Madrid xagaaga.
Chelsea ayay u badan tahay inay ku dalbato Hazard adduun dhan 100 milyan oo gini, laakiin Real Madrid ayaa la filayaa inay heshiis la gaarto kooxda ka dhisan horyaalka Premier League si ay uga qaadato xiddiga xulka qaranka Belgium.
Manchester United oo weli xiiso u qabta Weeraryanka Juventus ee Paulo Dybala & Tartan adag oo ay kala kulmayso Kooxda...